क्याटरिनाद्वारा रणवीर कपुरसँग काम नगर्ने घोषणा, रणवीरको प्रतिक्रिया, मेरो पनि छैन मुड ! | NepalDainik
क्याटरिनाद्वारा रणवीर कपुरसँग काम नगर्ने घोषणा, रणवीरको प्रतिक्रिया, मेरो पनि छैन मुड !
एजेन्सी – रणबीर कपूर र क्याटरिना क्याफको अपेक्षाकृत (मोस्ट अवेटेड फिल्म) ‘जग्गा जासूस’ आउँदो महिना रिलीज हुदैछ। रणबीर-क्याटरिनाकाबीच मनमुटाव भए पनि फिल्म प्रमोशनको लागि भने एक साथ देखिएका छन्। दुवै जना मिलेर फिल्मको प्रचार गरिरहेका छन्।
यदि तपाई यी प्रमोशनमा एकसाथ देखिएसंगै दुईबीच सम्बन्ध सिमधुर बन्यो होला भन्ने सबैलाई लाग्न सक्छ तर दुर्भाग्य यस्तो हुनै सकेन। ‘मिड डे’ नामको पत्रिकाका अनुसार क्याटरिनाले अब देखि कहिले पनि रनवीरसँग फिल्म नखेल्ने बताएकी छन। कुनै बेला प्रेम सम्बन्धमा राम्रैसँग समाएका जोडी अहिले यस्तो अवस्था पुग्ला भन्ने कसैले सोचेको पनि थिएन होला सायद। जहाँ फिल्मको प्रमोशनल कार्यक्रमको बेला जब उनलाई पत्रकारले फेरी रनवीरसंग काम गर्नु हुन्छ भन्ने प्रश्नमा क्याटरिनाले यो कुरा असम्भवप्राय: रहेको बताईन। उता रनवीरले पनि क्याटरिनाको साथ काम गर्ने मुड नभएको जवाफ दिएका थिए।
यिनीहरु खासमा फिल्मका निर्देशक आनुराग कास्यवको लागि मात्र एक साथ फिल्मको प्रचारको लागि हिडेका हुन्। रनवीर र क्याटरिनाको प्रेमसम्बन्ध करिब ५ बर्ष सम्म चलेको थियो। यी दुई जोडीको सन् २०१६ मा ब्रेकअप भएको थियो। उनीहरुको ब्रेकअपकै कारण धेरै अघि नै बनेको फिल्म ‘जग्गा जासूस’ को रिलीजको मिति सरेको थियो।
Posted by Becoming Kishor at 5:34 PM
No Comment to " क्याटरिनाद्वारा रणवीर कपुरसँग काम नगर्ने घोषणा, रणवीरको प्रतिक्रिया, मेरो पनि छैन मुड ! "